Hardware, Software နဲ့ Operating System - Active IT
Hardware, Software နဲ့ Operating System
by thantsin | May 28, 2019 | General
တနေ့က ကျွန်တော်တို့ဆီ လာမေးလို့ပါ Operating System ဆိုတာဘာလဲတဲ့? ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တန်းခနဲ ဖြေပေးချင်ပေမဲ့ Hardware နဲ့ Software ကိုမှ ကွဲကွဲ ပြားပြားနားမလည်ဘူးဆိုရင် Operating System ကို ရှင်းပြလည်း နားလည်ဖို့ မလွယ်လောက်ပါဘူး.. အဲ့တော့ အရင်ဆုံး သိထားသင့်တဲ့ Hardware နဲ့ Software အကြောင်းကပဲ စလိုက်တာ ကောင်းပါမယ်..
ကွန်ပျူတာတွေ ဖုန်းတွေ မှာပါတဲ့ Software နဲ့ Hardware ဟာ လူတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စိတ်နဲ့ ခန္ဓာနဲ့ တော်တော်လေးတူတယ်… ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်မှာ ပါတဲ့ ပါးစပ်က စကားပြောတယ် အစာစားတယ်.. နားနှစ်ဘက်က နားထောင်တယ်.. စသည်ဖြင့် သူတို့ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်တွေကို လုပ်တယ်..
ဒါပေမဲ့ သူတို့ဘာသာ လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့ စိတ်က ခိုင်းမှလုပ်တာ.. ဥပမာ ဘေးနားမှာ ဘယ်လောက်ပဲ လော်ကြီးနဲ့ ဖွင့်ထားထား ကျွန်တော်တို့ စိတ်မဝင်စားတဲ့ကိစ္စ အာရုံမထားတဲ့ ကိစ္စဆို မကြားဘူး .. ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို စိတ်က ထိန်းချုပ်တယ်ပေါ့ .. ကွန်ပျူတာတွေမှာလည်း Hardware နဲ့ Software ဟာ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ .. Hardware တွေဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ တူတယ်. ထိလို့ ကိုင်လို့ရတယ်.. တကယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလုပ်တယ်..
ဒါပေမဲ့ သူတို့ ဘာလုပ်မယ်မလုပ်ဘူးကို ဆုံးဖြတ်ပေးတာကတော့ Software တွေပဲ.. အဲ့မှာမှ အခြေခံအကျဆုံး တစ်ခုကတော့ Operating System လို့ ခေါ်တဲ့ Software တွေဖြစ်တယ်..
Operating System ဟာ သဘောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မွေးရာပါ အသိစိတ်နဲ့တူတယ်.. သူဟာ ဘာမှ မြင့်မြင့်မားမား မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး.. ဒါကြောင့်သူ့ကို Low Level Software ရယ်လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်.. မြင့်မြင့်မားမား မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတာက ဒီလို..
ကျွန်တော်တို့ အခြေခံအသိစိတ်ဟာ မွေးရာပါ သင်္ချာမတွက်တက်ဘူး.. ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တက်မြောက်သလိုပဲ.. Operating System တစ်ခုဟာ ဘာကိုမှ သိပ်ပြီး ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မလုပ်နိုင်ဘူး..
ဥပမာ ပုံဆွဲချင်တဲ့လူအတွက်ဆို ပုံဆွဲလို့ရမယ့် Illustrator လိုမျိုးလိုတယ်.. စာရင်းကိုင်မယ့်လူအတွက်ဆို Excel လိုမျိုး သီးသန့် Software တွေလိုတယ်.. ဒီတော့ Operating System တစ်ခုရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ လူတွေမှာဆို အခြေခံ အသိဉာဏ်လိုမျိုးပဲ ပိုပြီး မြင့်မားတဲ့ အတက်ပညာတွေ လေ့လာလို့ရအောင် ပိုပြီး အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတယ်ပေါ့..
ခုခေတ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ သာမန် ကွန်ပျူတာတွေအတွက် အသုံးအများဆုံးက Windows ပေါ.. Apple Computer တွေအတွက်ဆို MacOS ပေါ့.. တခြား Developer Machine တွေနဲ့ Server တွေမှာတော့ Linux လို့ ခေါ်တဲ့ Operating System တွေကိုသုံးကြတယ်..
ဖုန်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ အများဆုံးက Android နဲ့ iOS ပေါ့.. ဒါတွေအားလုံးဟာ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနေပြီး အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ကို Operating System တွေလို့ခေါ်တာပါ..